AHOANA NO FOMBA HAMORONANA PEJY FANDRAHARAHANA AO AMIN'NY FACEBOOK - FACEBOOK - 2019
Famoronana pejy fandraharahana ao amin'ny Facebook
Anisan'ny fandaharan'asam-pandefasan-tserasera maro te-hahita fampiharana izay mety hampifandray ireo singa fototra rehetra amin'ny mpanjifa. Ny akaiky indrindra amin'ny famahana ity olana ity dia ny mpandrindra ny programa BitSpirit.
Ny fampiharana BitSpirit dia dikan-teny Shinoa avo lenta amin'ny programa download torrent BitComet. Ireo mpandrafitra dia nanandrana nampifanaraka ny fehezan-dalan'ny programa araka izay tratra mba hamaha ny olan'ny tontolon'ny asa ao amin'ny tamba BitTorrent.
Lesona: Ahoana ny fametrahana torrent BitSpirit
Manoro hevitra izahay mba hahita: programa hafa amin'ny famoahana torrents
Ny fametrahana rakitra ao amin'ny tambazotran'ny BitTorrent no tena asan'ny programa BitPyrite. Noho ny fehezan-dalan'ny rindrambaiko tsara kokoa, ny fampiharana dia mitantana tsara io asa io, ary amin'ny haavo haingana. Raha ilaina, ny programa dia manohana ny rindrankajy maro samihafa indray mandeha. Azo atao ny mifehy ny hafainganam-pandeha sy ny laharam-pahamehana
Rehefa tapaka ny fifandraisana na aorian'ny fijanonan'ny fiaramanidina noho ny filàna iray hafa, dia misy foana ny fahafahana hanohy izany avy eo amin'ny toeran'ny fiatoana.
Ny fandaharan'asa dia miara-miasa amin'ny raki-tsoratra ara-batana ara-batana sy ny rohy mankany amin'izy ireo, ary koa amin'ny rohy magnets, izay mety ho tapaka mihitsy aza.
Ny fampiharana koa dia afaka mandefa rakitra amin'ny alalan'ny eDonkey2000 sy Direct Connect networks. Fa ny rindrambaiko ho an'ny HTTP sy FTP dia tsy tohanana. Na izany aza, tsy ilaina izany ho an'ny mpanjifa.
Ny iray amin'ireo endri-javatra amin'ny programa dia fikambanana iray mahaliana amin'ny alalan'ny sokajy (anime, boky, lalao, mozika, horonan-tsary, programa, sns).
Eo am-pamakiana ny famoahana rakitra, manomboka ny fizarana ampahany entana mankany amin'ny mpisera BitTorrent hafa. Io endri-javatra io dia alefa amin'ny alàlan'ny default, saingy afaka manilikiliky ny hery izany.
Mba hahafahanao mamela ny rakitra amin'ny ordinateranao amin'ny tambajotra eDonkey2000 sy Direct Connect, dia tsy maintsy manokatra ny fidirana amin'izy ireo aloha ianao.
Io fampiharana io dia tsy ho mpanjifa feno mpihira raha tsy azo ampiasaina hamoronana torrents amin'ny tenany manokana. Ao BitSpirit, ampiasaina io endri-javatra io.
Fampahalalana mikasika ny torrent sy ny fikarohana
BitSpirit dia manome fampahalalana feno momba ilay torrent navoaka. Anisan'ireo tahirin-kevitra omena amin'ny download, tokony hampisongadina ny loharanon'ny torrent ianao, ny toerana misy ny loharano voalohany sy ny votoatin'ny tranokala, ny anaran'ny rakitra voarakitra ao amin'ny download, ny fandrosoana maimaim-poana, ny namana, sns.
BitSpirit koa dia manana milina fikarohana izay afaka mikaroka ireo torrents ao amin'ny mili-pikarohana Google, ary koa ho an'ny mpitatitra maro hafa. Saingy, ny vokatr'io olana io dia tsy voamarina fa tsy ao amin'ny fandaharam-potoana manokana, fa amin'ny alàlan'ny navigateur amin'ny pejy loharanom-pikarohana.
Anisan'ireo singa fanampiny amin'ny programa dia tokony hanasongadina ny mety hisoloana ny Value User Agent. Izany dia miaro ny BitSpirit amin'ny fanakanana ireo mpitatitra toromarika, izay i BitComet dia mijaly.
Ny fandaharam-potoana dia manana rafitra fikirakirana mahomby izay ahafahanao mamolavola ny famandrihana ho avy.
Misy ny fahafahana maminavina ny lahatsary navoaka. Ny BitSpirit client dia miditra ao amin'ny Internet Explorer.
Benefits of BitSpirit
Ny fiteny maro, anisan'izany ny fanohanana ny teny Rosiana;
Free rindrambaiko malalaka open source;
Mihena ny volo madinika sy ny RAM izy io.
Ny tsy fahampian'ny BitSpirit
Tsy miasa afa-tsy ao amin'ny sehatra Windows;
Ny famoahana farany ny fandaharana dia navoaka tamin'ny taona 2010.
Ny BitSpirit fandaharan-teny dia torohay fampitaovana maro samihafa, izay nanandrana ny hampifangaroana ireo singa fototra rehetra amin'ny programa mitovy amin'izany ny mpikaroka, tsy manavakavaka ny haavon'ny fangatahana. Fa, na izany aza, raha mbola eo an-dàlam-pahamendrehana ity mpanjifa ity dia mbola ambany noho ny programa uTorrent sy BitTorrent.
Download BitSpirit ho an'ny maimaim-poana
Manangana torrent BitSpirit Bit Torrent BitComet Tixati
BitSpirit dia programa maimaim-poana izay mampifandray ny fahafahan'ireo mpanjifany torrent sy mpandrindra Download miaraka amin'ny fanohanana amin'ny famoahana ireo rakitra samihafa.
Category: Torrent Windows Clients
https://termotools.com mg.termotools.com © Facebook 2019